Carabta oo ku kala qaybsamay shir madaxeed lagu waday inuu ka dhaco Lebanan – Radio Daljir
Carabta oo ku kala qaybsamay shir madaxeed lagu waday inuu ka dhaco Lebanan
Janaayo 20, 2019 7:18 b 0
Kasoo qaybglaka kulanka hogaamiyeyaasha gobolka oo liita iyo ku kala qaybsanaanta siyaasadda wadanka Suuriya ayaa sabab u noqotay inuu guul daraysto shir madaxeedka Horumarinta Dhaqaalaha iyo Bulshada ee dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta.
Amiirka dalka Qatar ayaa la filyay inuu kasoo qaybgalo shirka, madaxwaynaha Libnaan ayaa isaguna safar dibadda ah aaday uu ku tagayo Mediterranean , kahor shirka inta uu furmin, iyadoona madaxwaynaha Muritaaniya Maxamed Cabdalcasiis oo ahaa madaxwaynaha kaliya ee shirkan ka qaybgalayay uu kusoo dhoweeyey garroonka diyaaradaha ee Beirut.
Shirka oo si horudhac ah u furmay ayaa waxaa isaga baxay Amiirka Kuwayd iyo madaxwaynayaasha Masar iyo Falastiin.
Dowladaha Carabta ayaa ku kala qaybsamay in shirkan looga hadlo ajande ku saabsan dowladda Suuriya inay dib ugu soo laabato xubinimada ururka Jaamacadda Carabta oo laga saaray sanadkii 2011kii , kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay xuquuqda shacabka Suuriya oo ay rasaas la dhacday.
Dowladda Lubnaan ee saamaynta ay ku leeyihiin Xisbulah ayaa dabada ka riixayay inay dowladda Suuriya oo xulufo la’ ah Iiraan kusoo laabato xubinimada, waxaana taasi ay sababtay in hogaamiyeyaaasha qaarkood daqiiqadihii shirka inay ka baxaan.
Askari Mareykan ah oo lagu soo oogay dilka wiil madow ah (daawo)